QALABKA XAYAWAANKA EE BISADAHA: DIB U EEGISTA CALAAMADAHA UGU CAANSAN QIIMAHA CELCELISKA, IYO SIDOO KALE FAA'IIDADA IYO KHASAAROOYINKA ISTICMAALKA - GURI, GURI
Daboolka ka soo jeeda boodada iyo shilinta bisadaha waa mid fudud oo badbaado leh.
Waa ku filan inaad ku ridato bisad oo aad illoobi karto dulin.
Inkastoo aaney run ahayn.
Aynu si fiican u fahanno su'aashan.
Sidee ayey u shaqeysaa
Daboolka waa cajalad caag ah oo dhererkiisu ka dheeraynayo 30 ilaa 40 sentimitir, la gooyey daawooyinka antiparasititic.
Si tartiib ah uga soo kabashada daroogada wuxuu ku fidaa dufanka subcutanousiyada oo loo marayo qanjidhada xayawaanka ah ee loo yaqaan "nostros" ayaa loo wareejiyaa maqaarka iyo wuxuu leeyahay cayayaanka-acaricidal iyo waxyeellooyinka soo noqnoqda, injirta, nadiifinta, shilinta.
Marka la eego mabda'a soo-gaadhista, colaadku way ka duwan yihiin warbaahinta dareeraha.. Waxay burburiyaan oo ku celiyaan dulinyada leh sunta isku midka ah ee ka dhigaysa dhibco, shaambo ama buufiyo.
Kuwani waxay noqon karaan fursado kala duwan: tetrachlorinphos (vinfos, dhadhan, macaan), fipronil, soo jeedin, flumetrin, diazion. Halbeegga xakameynta waxaa laga yaabaa in lagu daro xeerka kobcinta cayayaanka, daawoyinka kala duwan.
Daboolka ma jirto nabdoon ama antiallergenic ka badan dhibco iyo buufiyo. Waxay ka duwan tahay dhibcooyinka ay tahay in la isticmaalo bil kasta, ayada si wax ku ool ah u shaqeeya dhawr bilood.
Noocyo bey'ad u fiican oo dabiici ah ku calaamadeey sanduuqa BIO. Waxay ku xiran yihiin isku dhafka saliidda dhirta dabiiciga ah, tusaale ahaan, mangos, waxay ka cabsi qabaan in ka badan inta ay ku sumoobayaan dulin, laakiin ma siinayaan saameyno oo ay ku habboon yihiin kuwa ugu yar yar.
Waa muhiim! Kabaha waa in aan loo isticmaalin sunta cayayaanka kale. Dhibaatooyinka is-dhaafsiga ee daroogada ayaa si xun u saameeya caafimaadka bakeeriga. Dareen-celinta xasaasiyadeed ee suuragalka ah, timo lumis, cudurada maqaarka.
Daboolka Waxtar la'aan ka soo horjeeda dirxiga. Dirxiga oo ku xiran timaha xayawaanku ma awoodaan inay ka baxaan bisad iyaga keligood. Laakiin, sida ugu dhakhsaha badan ee uu ilmuhu noqdo qof wayn, waxay isku dayi doontaa inay ka baxdo meel khatar ah.
Hubi taariikhda dhicitaanka. Si taxadar leh u akhri tilmaamaha. Macaawayaasha uurka leh, naas-nuujinta, kittens-ka sanduuqa waa inay lahaadaan fasax ku haboon.
Furo baakadaha daboolan. Kordhee cajalad caag ah.
Ku dhaji baalasha, u habee taallka. Daboolka waa inuusan keenin raaxo darradeeda.
Xir xir furaha ama adkee bacda. Iska yaree xadiga. Waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo daruuri, haddii kale bisad ayaa laga yaabaa inuu sumawo, isagoo isku dayaya inuu ka saaro cajaladda ilkaha.
Tusaalooyin qiimo lehTusaale ahaan, Bayer Foresto, la dhamaystiray kobcinta iftiinka. Waa inay ku xiran yihiin qoorta.
Xusuuso inaad dib u warshadayso oo gacmahaaga dhaq..
Haddii aad qabatid nabarrooyin cusub ama gacmo-dhaqasho, waa inaad isticmaashaa gacan-gashi gacmo-gashi..
Kala iibiya badanaaba waxay ku taliyaan maalmo yar ka hor intaanad qoryaha saarin, ku dhaq kalluunka shaambada, daawee qashin.
Sii socda iyada oo ku xiran isugeynta Isticmaalida qoorta ayaa u dhexeysa laba bilood illaa todoba.
Ku dhowaad dhammaan qoryaha waa biyuhu aanay lahayn, Kama saari kartid marka aad qubeysanaysid xayawaankaaga. Si kastaba ha noqotee, mid waa in uu ka fogaadaa taabasho joogta ah oo muddo dheer socota biyo. Tani waxay yareyn doontaa nolosha inta ay kudhalatay.
Noqo mid xiisaha leh! Haddii cuncunku uu ka muuqdo maqaarka xayawaanka, quudinta ayaa kordhay, ka dibna waxaa jira suurtogalnimada in walxaha firfircoon ee qayb ka mid ah cayayaanka aan ku haboonayn xayawaankaaga. Waxaad tijaabin kartaa sheyga walax kale oo firfircoon.
Dareemaha waa in aan loo isticmaalin bukaanka, uurka, naas nuujinta, carruurta yar yar.
Qiimaha iyo Suuqyada
Qiimaha xidhidhka ee Ruushku wuu kala duwan yahay laga bilaabo 70 (Dhakhtar ZOO) ilaa 1700 (Foresto). Dhammaan waxay ku xiran tahay soo saaraha, halabuurka loo yaqaan "impregnation", tayada baakadka. Sida caadiga ah, moodooyinka aan qaali ahayn, oo ku kala duwan guryaha bogsashada wanaagsan, waxay leeyihiin mudo gaaban oo ilaalin ah.
Kuwa ugu caansan
Iyadoo loo adeegsanayo xubno firfircoon tetrachlorinphos (TCVP) ama diazinon. Dhammaan moodooyinka waa kuwo aan biyuhu lahayn, oo leh qalab furan oo furan, waxtar u ah baaskiil 5-7 bilood.
Sidoo kale, shirkad Dutch ah waxay soo saartaa qoryaha BIO., kaas oo saliidda mangose ​​cayayaanka dhirta loo isticmaalo sida impregnation.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay xayawaanka dabiiciga ah, fuudka dibudhiska. Shidaalka ayaa leh antibiyootiko, ka hortagga iyo ka hortagga fayraska. Xabashadan shimbiraha ah ee loogu talagalay ilmo yar oo ka soo jeeda laba bilood ayaa sidoo kale ku haboon.
Waxaa laga soo saaray Jarmalka oo ku saabsan Bayer. Qaybta ugu firfircoon ee firfircooni waa kalluunka. Biyo la'aan, wuxuu ka ilaaliyaa boodada 4 bilood, laga bilaabo shilinta ilaa 10 asbuuc. Iyadoo la raacayo talooyinka ku saabsan arjiga macnaheedu maaha inay saxdo, dareemid xasaasiyad.
Qiimaha celceliska moodooyinka Bolfo, Beafar 200-300 Rug.
Iskuday inaadan waxyeeleynin xayawaankaaga. Isticmaal kaliya moodooyinka shahaadeysan ee lagu iibsaday dukaamo badan ama farmashiyeyaal caafimaad. Iska diid inaad isticmaashid haddii uu jiro ilmo ku jira guriga.